AKHRISO: Taariirkh nololeedka Shiikhii Gaalkacyo lagu dilay maanta – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAAKHRISO: Taariirkh nololeedka Shiikhii Gaalkacyo lagu dilay maanta
AKHRISO: Taariirkh nololeedka Shiikhii Gaalkacyo lagu dilay maanta
November 26, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on AKHRISO: Taariirkh nololeedka Shiikhii Gaalkacyo lagu dilay maanta
Waxaa magaciisa oo saddaxan uu ahaa Sh Cabdi wali Sh Cali Cilmi Yare.
Sida uu BBC u sheegay nin aqoon dheer u lahaa sH CabdiWali ayaa da’diisa lagu qiyaasay dhowr iyo lixdan sano.
Sh Cabdiwali Sh Cali Cilmi Yare waxaa uu ku dhashay tuulo lagu magacaabo Laguraqsay oo Gaalkacyo qayaastii dhowr iyo lixdan kiilomitir dhanka Koonfur Galbeed kaga beegan.
Waxaa uu xifdinta Quraanka iyo Tafsiirkiisaba ku bartay isla tuulada uu ku dhashay oo uu aabihii ka ahaa wadaad caalim ah, mowlacna uu ku lahaa.
Aabihii, Sh Cali Cilmi Yare waxaa uu ahaa wadaad aad diinta u yaqaana islamarkana faafiya,gaar ahaan waxa uu caan ka ahaa gobolka Mudug.
Sh Cabdi Wali markii uu soo hanaqaaday waxa uu noqday nin kaxeeya gawaarida xamuulka qaada islamarkana shaqada darawalnimada waxaa uu ka shaqaysanayay muddo.
Muddadii uu xerta ahaa “waxa uu khilaaf dhexmaray isaga iyo raggii khaadumiinta u ahaan jiray aabihii Sh Cali Cilmi Yare, sababtana waxa ay ahayd hab dhaqankiisa oo ay sheekha uga warami jireen”.
Horraantii sanaddii 2000 ayuu Sh CabdiWali waxaa uu magaalada Muqdisho ka furtay xarun dadka uu Quraanka ku saari jiray halkaasi oo uu dadka wax uga tumi jiray quraana ku saari jiray sida uu sheegay nin magaciisa qariyay oo shiikha aqoon duruqsan u lahaa oo BBC’da la hadlay.
Sanadii 2006 markii ay maxkamadaha qabsadeen magaalada Muqdisho waxaa uu u soo wareegay magaalada Galkacyo, halkaasi oo quraan saarkii uu ka sii waday kitaabna uu ka akhrin jiray.
Sida uu BBC u sheegay ninka aqoonta dheer u lahaa, Sh Cabdiwali ayaa 2012 billaabay in uu qasiidooyiin sameeyo.
Sanad ka dib waxaa uu magaalada Gaalkacyo ka furay xarunta maanta la weeraray oo uu u bixiyay “Xarunta Nabiga”.
Xaruntan ayaa waxaa uu isugu keenay dhallinyaro, halkaasi oo uu ka soo saari jiray Heeso iyo Nabi ammaan muran dhaliyey.
Waxaa xarunta agteeda ku taalay goob ay maamulka Galmudug ugu talagaleen in xarunta haweenka in ay noqoto balse Sh Cabdi wali ayaa xaruntaasi ku darsatay ka dib markii uu sheegay in uu u baahan yahay.
“Maadaama uu Sh Cbadiwali diinta yaqiinay waxaa uu iigu jawaabay in wax kasta uu mas’alo diini ah u hayo, islamarkaana ciddii doonaysa in laga jaahil bixiyo ay soo fariisato”. Ayuu yiri
Sh Cabdi wali Sh Cali Cilmi Yare ayaa dadka dhaliila waxay ku eedeeyeen in uu shaaciyay masawir uu ku sheegay in uu yahay Nabi Maxamed Nabadgalyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee.
Balse wareysi uu bishii September, 2017 siiyay BBC ayuu ku beeniyay eedeeyntaasi loo soo jeediyay.
“Anigu cilmigaa ma gaarin wax lug ahna kuma lihi” ayuu yiri.
Sh Cabdiwali ayaa sheegay in sawirka la sheegay uu yahay midka Sheekhiisa.
“Adiga ayaan kaa maqlayaa nabi Maxamed ayaa la soo sawiray, laakiin sheekeyga ayaa Maxamed la yiraahdaa waana xabiibkeyga, nabi Maxamedna kuma sheegin haddana ku sheegi maayo” ayuu yiri.
Saaka ayay rag hubaysan waxay gudaha u galeen xaruntii sh Cabadiwali iyo qaar ka mid ah xirtisa lagu dilay.
Al Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda dilkaas, waxayna sheegeen inay hore ugu digeen.
DHAGEYSO: Wararkii ugu dambeeyay Qarax Khasaare geystay oo Muqdisho ka dhacay
SAWIRO: Shir looga hadlayey amniga dalka oo Muqdisho lagu qabtay
650,010 total views, 4,326 views today
650,010 total views, 4,326 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
649,884 total views, 4,329 views today
649,884 total views, 4,329 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
649,912 total views, 4,324 views today
649,912 total views, 4,324 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
649,972 total views, 4,326 views today
649,972 total views, 4,326 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
650,034 total views, 4,328 views today
650,034 total views, 4,328 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]